दयाहाङलाई ०७३ साल कति फाप्यो ? « Mazzako Online
दयाहाङलाई ०७३ साल कति फाप्यो ?
अभिनेता दयाहाङ राई वर्ष ०७३ मा सर्वाधिक व्यस्त भए । सुटिङ, फिल्म प्रचार र देश तथा विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा दयालाई फुर्सद भएन । तर व्यस्त दयाहाङको यो साल प्रशंसायोग्य भयो त ? प्रदर्शनमा आएका फिल्महरु मध्ये कुनले कस्तो व्यापार गरे अनि उनको भूमिकालाई दर्शकले कस्तो प्रतिक्रिया दिए ? छोटो चर्चा गरौं :
बर्षको सुरुवातमा प्रदर्शन भएको दयाहाङ अभिनित फिल्म ‘हाउ फन्नी’ औषत हिट भयो । मल्टी स्टारर फिल्ममा दयाको भूमिकालाई दर्शकले सोचे जस्तो ‘फन्नी’ भने पाएनन् । फिल्म ‘वीर विक्रम’ हेरेर दयाको भूमिकालाई दर्शकले ‘राम्रै’ भने । फिल्म पनि हिट भयो । यता ‘झुम्की’ र ‘पुरानो डुङ्गा’ बाट भने दयाका दर्शक बिच्किए । ‘पुरानो डुङ्गा’ ले इनिसियलको व्यापार गर्यो तर दयाको भूमिकालाई दर्शकले ‘वाही वाही’ गरेनन् । जबकी फिल्म निकै प्रतिक्षित बन्न गएको थियो। व्यापारिक रुपमा असफल भएको फिल्म ‘झुम्की’ बाट पनि दयाले दर्शकबाट उस्तै गुनासो सुन्नु पर्यो । फिल्म ‘सेतो सूर्य’ मा भने दया फरक भूमिकामा प्रस्तुत भए । सार्वजनिक प्रदर्शनमा फिल्मले गतिलो व्यापार नगरेपनि दयाको भूमिकालाई भने रुचाइयो ।
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘लुट २’ मा दयाको भूमिका अपेक्षाकृत नभएको दर्शकको गुनासो भयो । यद्पी फिल्मले सुपरहटिको व्यापार गर्यो । ‘लप्पन छप्पन’ मा दया आफ्नो भूमिकामा फिट देखिए । फिल्म पनि औषत हिट मानिएको छ । हालपनि कतिपय हलहरुमा यो फिल्म प्रदर्शनरत छ । ०७३ सलामा दया अभिनित ७ फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् ।